Nke a bụ ihe Samsung Galaxy Note 10 nwere ike ịdị Gam akporosis
Ntughari ohuru a na-eche anya nke usoro Samsung S huru ìhè na February gara aga, na otu ihe ngosi nke ụlọ ọrụ Korea webatara Samsung Galaxy Fold, ụlọ ọrụ mbụ nkwa na mpịachi smartphones, ma nke ọ gaghị abụ nke ikpeazụ.
Samsung ọhụrụ S usoro imewe na-enye anyị ihu ebe ihe niile bụ ihe ngebichibelụsọ obere etiti na obere etiti. N'elu aka nri nke ihuenyo, anyị na-ahụ igwefoto (s) n'ihu. N'ụzọ doro anya, Galaxy Note 10 ga-agbaso otu usoro akara ahụ.
Guysmụ okorobịa nọ na PhoneArena ebipụtala nsụgharị dị iche iche ebe anyị nwere ike ịmata ihe ngwaọrụ ahụ ga - adị, ngwaọrụ nke na - egosi anyị ihe dịka ụdị Samsung S. Ọ ga-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ nyere ọtụtụ agba dị iche iche, dị ka PhoneArena na-egosi anyị, ihe bụ n'ezie eleghi anya, mana ilele omume nke ahia, enwere ike ime ya.
Na azụ, anyị na-abanye 4 ese foto n'azụ. Asịrị tupu mmalite nke Galaxy S10 + tụrụ aro na ụdị a nwekwara ike ịnwe igwefoto 4 na azụ, ọ bụ ezie na n'ikpeazụ ụlọ ọrụ ahọrọ ịtinye 3. Ọ bụrụ na ha nwere igwefoto 3 ha nwere ike ịnye otu ihe ahụ na nke 4, ọ bụ ihe nzuzu ịgbakwunye otu igwefoto ọzọ.
N'okpuru ihuenyo ị ga-ahụkwa ihe ntanetị mkpịsị aka ultrasonic, ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na-esiri ndị mmadụ ike iji na na ibido mee ka a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nnyocha maka ya ọrụ, a dị iche iche ọrụ si na omenala ngwa anya mkpisiaka mmetụta. A ikpe na-echetara m nke mgbe iPhone 4 nwere mkpuchi nsogbu, nsogbu na dị ka Steve Jobs na-kpatara onye ọrụ na-ekwu na anyị na-emejọ ya.
Ihe ngosi 10 dị na Galaxy nwere ike ịbụ njedebe mbụ na nso a ga-ewepu Jack,, njikọ nke ọ dị ka Samsung nwere mmetụta pụrụ iche ebe ọ na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ya site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Nke a bụ ihe Samsung Galaxy Note 10 nwere ike ịdị
Samsung Galaxy A9 emelitere na gam akporo achịcha